भोली पार्टी एकता हुँदै ! - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
भोली पार्टी एकता हुँदै !
Published On : २ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:०९
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भयो । बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताले संभवत भोली नै पार्टी एकता गर्नै मोटामोटी सहमति भएको छ ।
मदन भण्डारीको २५ औं स्मृती दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता हुन लागेको हो । २०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा परी ज्यान गएको थियो ।
पार्टी एकताका लागि चुनामवमा एउटै राजनीतिक मुद्दा बनाएर लडेका पार्टीबीच केही राजनीतिक बाँडफाँडका विषयमा कुरा मिल्न बाँकी थियो । पार्टी एकता गर्न केही ढिलाइभइरहेका बेला बुधबार बिहान ओली र प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो । बैठकपछि दुवै पार्टीका अध्यक्षले हर्षित मुद्रामा फोटो खिचाएका थिए ।
कस्तो छ कार्यतालिका ?
मदन भण्डारीको शालिकमा बिहीबार विहान ७ बजे दुवै पार्टीका नेताले माल्यापर्ण गर्नेछन् । त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने र साँझ पत्रकारसम्मेलन गरेर पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । सम्भव भए भोलि नै ‘नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने दुई दलको तयारी छ । आमसभा भने केही दिनपछि गरिनेछ ।